I-Trendy Tech ne-Big Data: Yini Okufanele Uyibheke Ekucwaningweni Kwemakethe ngo-2020 | Martech Zone
I-Trendy Tech ne-Big Data: Yini Okufanele Uyibheke Ekucwaningweni Kwemakethe ngo-2020
NgoMsombuluko, Mashi 2, 2020 NgoMsombuluko, Mashi 2, 2020 ISudip Saha
Lokho okwakubonakala kudala ngathi ikusasa elikude manje selifikile: Unyaka wezi-2020 ekugcineni ususifikile. Ababhali bezinganekwane zesayensi, ososayensi abaqavile, kanye nosopolitiki kudala babikezela ukuthi umhlaba uzobukeka kanjani futhi, yize sisenokungabi nazo izimoto ezindizayo, amakoloni abantu eMars, noma imigwaqo emikhulu ewumhubhe, intuthuko yezobuchwepheshe yanamuhla iyamangalisa ngempela - futhi izokwenza qhubeka ukwanda.
Uma kukhulunywa ngocwaningo lwezimakethe, ubuchwepheshe obusha bale minyaka eyishumi entsha buza nezinselelo ezizodinga ukunqotshwa ukuze kutholakale impumelelo ehlala njalo. Nazi ezinye zezinkinga ezivelele lapho ucwaningo lwemakethe oluzodinga ukuzibheka ku-2020 nokuthi izinkampani kufanele zikhulume nazo kanjani.
Ukuhlalisana Okuqhubekayo ne-AI
Umkhuba obaluleke kakhulu kule minyaka eyishumi ezayo kuzoba wukwanda okwandayo kobuhlakani bokufakelwa kuzo zonke izimboni. Eqinisweni, ukusetshenziswa okuphelele kwe-AI nezinhlelo zokuqonda kulindeleke ukuthi kudlule ama- $ 52 billion ngonyaka ka-2021, ngokucwaninga kwakamuva okutholwe ukuthi abacwaningi bemakethe abangama-80% bakholelwa ukuthi i-AI izoba nomthelela omuhle emakethe.
Yize lokhu kungabonakala njengokukhombisa ukuthatha kwehhovisi okuholwa ngomshini okuseduze, kusasele indlela ende okufanele siyenze ngaphambi kokuba imishini ikwazi ukulawula indawo yokusebenza - kunezinto eziningi kakhulu laphaya i-AI engakwazi ukuzenza okwamanje.
Emkhakheni wocwaningo lwemakethe, inhlanganisela yamathuluzi okucwaninga ajwayelekile futhi asuselwa ku-AI ayadingeka ukuze kuphumelele kakhulu. Ukucabanga ngemuva kwalokhu ukuthi, yize intuthuko kubuchwepheshe be-AI ibimangalisa, namanje ayikwazi ukuphindaphinda ukuqonda komuntu noma inikeze ukuqonda okujule ezintweni ezahlukahlukene zangaphandle zomkhakha othile.
In ucwaningo lwemakethe, I-AI isetshenziselwa kangcono ukwenza imisebenzi ephansi ebopha isikhathi sabacwaningi - izinto ezinjengokuthola amasampula, ukwenziwa kohlolo, ukuhlanzwa kwedatha, nokuhlaziywa kwedatha okuluhlaza, kukhulula abantu ukuthi basebenzise ingqondo yabo yokuhlaziya ukwenza imisebenzi eyinkimbinkimbi. Abaphenyi bese bekwazi ukunikela ngokugcwele ulwazi lwabo oluningi ukuze bahumushe izitayela futhi banikeze ukuqonda - okuningi okuqoqwa ngamathuluzi we-automation.
Ngamafuphi, ubuchwepheshe be-AI bungathola inqwaba yedatha ngesikhathi esifushane. Kodwa-ke, akuyona idatha efanele ngaso sonke isikhathi - futhi lapha kulapho ingqondo yomuntu ingena khona ukuthola idatha efanelekile kakhulu ongayisebenzisela ucwaningo lwemakethe. Sebenzisa amandla we-AI nobuhlakani bebhizinisi lomuntu ezintweni zabo zemvelo kunika izinkampani ukuqonda ukuthi bebengeke bakuthole ngenye indlela.
Ukuphepha Kwedatha nokubonisa ngale ku-Digital Age
Ngenkinga entsha yobumfihlo ebonakala minyaka yonke, ukuphepha kwedatha kanye nokwanda okuphethe ekuphathweni kuyinkinga enkulu cishe kuyo yonke imboni ebhekana nedatha yamakhasimende. Ukungathembani komphakathi ekunikezeni ngemininingwane yabo kuyisihloko esishisayo lapho yonke inkampani yocwaningo lwemakethe izodinga ukuyicubungula manje nasesikhathini esizayo.
Lokhu kubaluleke ngendlela emangalisayo ngonyaka ozayo. I-2020 izophinde ilethe imicimbi emibili emikhulu yomhlaba engahle igcwaliswe ngemikhankaso yokwaziswa okungeyona imininingwane evela kubantu besithathu: iBrexit nokhetho lwaseMelika. Ukungafihli lutho kusuka embonini yocwaningo emakethe kuzoba yinto esemqoka: Izinkampani zidinga ukukhombisa umhlaba ukuthi ukuqonda abakutholayo kuzosetshenziswa njengamandla okulungisa izimpilo zabantu kunokuba kusetshenziselwe ukusabalalisa inkulumo-ze. Ngakho-ke izinkampani zingaguquguqula kanjani futhi ziphinde zikuthole lokhu kuthembela ngenxa yesimo sezulu samanje?
Ukuze ufinyelele kule mpikiswano ephathelene nokuziphatha, izinkampani zocwaningo zemakethe kufanele zisebenzise ithuba lokwenza ikhodi yokusetshenziswa kwedatha ngendlela efanele. Ngenkathi izinhlangano zokuhweba zocwaningo ezifana ne-ESOMAR ne-MRS sekuyisikhathi eside zigcina imihlahlandlela ethile yezinkampani ezenza ucwaningo lwezimakethe ukuthi zithobele uma kuziwa ekubhekaneni nalezi zinkinga, kudingeka ukuthi kubuyekezwe ngokujulile izimiso zokuziphatha lapho kwenziwa ucwaningo.
Impendulo inguphethiloli wokuphila ocwaningweni lwezimakethe, okuvame ukuza ngohlobo locwaningo olusetshenziselwa ukuthuthukisa imikhiqizo, ukuzibandakanya kwamakhasimende noma kwabasebenzi, noma okunye ukusetshenziswa okuningi. Okwenziwa yizinkampani ngemininingwane etholwe ngalolu cwaningo - futhi okubaluleke kakhulu, ukuthi zidlulisela ngempumelelo kangakanani kulabo abathatha imininingwane - kubalulekile emikhankasweni yocwaningo yesikhathi esizayo.
Uma kukhulunywa ngobumfihlo bedatha, i-blockchain ingaba yimpendulo yokuqinisekisa amakhasimende ukuthi idatha yawo igcinwa ngokuphepha nangokusobala. IBlockchain isivele ithole ukuvelela njengobunye bobuchwepheshe obusha kakhulu bekhulu lama-21 futhi, ngo-2020, ukubaluleka kwe-blockchain kuzokwanda kuphela njengoba izimboni ezintsha ziqala ukukusebenzisa ezinhlelweni zazo zokuvikela idatha. Nge-blockchain, idatha yomsebenzisi ingaqoqwa ngokuphepha nangokusobala yizinkampani zocwaningo zemakethe, okwandisa ukwethembana ngaphandle kokunciphisa ukusebenza kwedatha.
Ikusasa Eliqhakazile Lokuqoqwa Kwemininingwane ye-5G
I-5G ekugcineni ilapha, nezinkampani zokuxhumana ngocingo ziyaqhubeka nokukhipha ukufinyeleleka emadolobheni emhlabeni wonke. Yize kuzothatha isikhashana ukuzwa izinzuzo ezibaluleke kakhulu, izimoto ezingashayeli, amageyimu we-VR angenantambo, amarobhothi wokulawula kude, kanye namadolobha ahlakaniphile ayingxenye yekusasa elimangalisayo elizohanjiswa ubuchwepheshe be-5G. Ngenxa yalokhu, izinkampani ezenza ucwaningo lwezimakethe zizodinga ukuthi zifunde ukuthi zingabusebenzisa kanjani ubuchwepheshe obungenantambo be-5G kumasu abo wokuqoqa idatha.
Ukuhlangana okusobala kakhulu ocwaningweni lwemakethe kuzoba ukwanda kwenani locwaningo oluphothulwe ngamaselula. Njengoba amakhasimende azokwazi ukuzwa isivinini esiphakeme kakhulu kumadivayisi wabo weselula, maningi amathuba okuba afinyelele kuhlolo kumadivayisi eselula. Kepha ngokusetshenziswa okwandisiwe kwamadivayisi ahlakaniphile ezimotweni, izinto zasendlini, amasistimu asekhaya, namabhizinisi, ubukhulu bokuqoqwa kwedatha okungenzeka bukhuphuke kakhulu. Ucwaningo lweMakethe ludinga ukusizakala ngalokhu.
Kusukela ekusungulweni kobuchwepheshe kuya kuzinguquko endleleni abathengi abasabela ngayo kudatha, i-2020 izoletha nezinguquko eziningi izinkampani ezenza ucwaningo lwezimakethe ezizodinga ukuzilalela. Ngokuqhubeka nokuzivumelanisa nentuthuko yezobuchwepheshe ngokulungisa amasu abo, ucwaningo lwezimakethe luzolungiselelwa kangcono ukuphumelela manje nakule minyaka eyishumi esele.
Tags: 5gukuhlakanipha okungekhona okwangempelaumthethonquboobala
ISudip Saha, i-COO ye Imininingwane Yasemakethe Yesikhathi Esizayo, ucwaningo lwemakethe oluthola umklomelo kanye nefemu yokubonisana. Isazi sebhizinisi esisebenza ngokukhula esinolwazi oluningi ocwaningweni lwezimakethe nasekuphathweni kwephrojekthi kuma-verticals e-APAC, EMEA naseMelika, iSudip iyikholwa eliqinile futhi lisekela izixazululo ezisuselwa emisha, ngokugcizelela ekwakheni izixazululo ezenziwe ngezifiso ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ezahlukahlukene .
Ama-GetEmails: Khomba Ku-35% We-Web Traffic Yakho Engaziwa bese Ukhulisa Uhlu Lakho Lwe-imeyili
Izingxenyekazi ezingama-30 Zokuxhumana Komphakathi